Akwụsịrị ụda mmalite na ọhụrụ Macbook Pro. Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi megharịa ya | Esi m mac
Otu n'ime esemokwu mbụ anyị hụrụ na Mac ọhụrụ ahụ, ha pụtara ìhè ozugbo anyị gbanyụrụ akụrụngwa maka oge mbụ. Emeghị mkpọmkpọ ama ama ama na Macbook Pro mbubreyo 2016. Nke a abịala mepụta ihe ịtụnanya n'akụkụ nke kachasi ihe egwu nke ụlọ ọrụ ahụ. Ma atụla ụjọ, dịka anyị ga-ahụ ma emechaa, ọ ga-ekwe omume imegharị ya.
Ọ bụ site na Jim reekes na 1991, ma e jiri ya mee ihe na Macs na nke abụọ nke Steve Jobs, mgbe o mere mkpebi itinye ya na Macs niile na-amalite na 1997.
Ma ụda a ka e kere dị ka ihe njirimara mmewere nke Mac. A na-adapụta ụda iji gwa onye ọrụ na akụrụngwa na-amalite nke ọma. Ọ gụnyere nyocha mbụ nke kọmputa iji nyochaa na ihe niile na-arụ ọrụ dịka o kwesiri ma na-aga n'ihu na buut.
Kama Apple kpebiri ịgbanwe atụmatụ. A na-ere ọtụtụ Macs ndị na-ebugharị ma n'ihi nbelata ibu na akụkụ anyị na-ewere ha ebe ọ bụla. Ya mere, ịgbanye Mac n’ebe ụfọdụ dịka ọfịs ma ọ bụ ọba akwụkwọ na -emepụta ụfọdụ iwe. Ya mere Site na ndabara na Macbook Pro na njedebe nke 2016, ọ ga-ewepụta ụda ahụ naanị mgbe ihe mejọrọN'adịghị ka ruo ugbu a.
Mana ọ bụrụ na ịnweghị iji akụrụngwa gị n'ebe ndị nwere obere mkpọtụ ma ọ bụ naanị ịchọrọ inwe agụụ maka ụda a ma chọọ inwe ya, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị ha gwara anyị na weebụsaịtị pinguie.com:
Mepee ngwa Ọnụ. Ọ bụrụ na ị maghị ya. Nwere ike imeghe ya site na ọnụ, na ịpị oghere cmd +. Ugbu a, ị ga-apịnye ọnụ na pịa tinye.
Detuo na mado usoro ndị a na ihuenyo ngwa:
Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara nma ọ bụ ị chọrọ ụda mmalite ka a ga-ebupụta, mee isi 1 na 2 n'elu ọzọ, mana oge a dee:
Onwe m, ahụrụ m ozi ndị a Apple na-ewetara anyị mgbe anyị hụrụ sọftụwia ọhụrụ ma ọ bụ akụrụngwa, yabụ anyị ga-agwa gị ozi ọ bụla n'akụkụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Akwụsịrị ụda mmalite na Macbook Pro ọhụrụ. Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi megharịa ya
I meela nke ukwuu maka ozi a, obere nkọwa ndị a nwere ike inye anyị isi ọwụwa 😛
Zaghachi Shisui Uchiha